Tsy azo ihodivirana intsony ny fivadihana amin’ny biometrika hoy ny Ceni mba hahafahana manomana ny fifidianana.
Mitaky ny hanaovana ny lisi-pifidianana ho biometrika ny Ceni kanefa ny vola eo am-pelatanana tsy mahatakatra an’izany. Tsy te-hibaby izay lany rehetra amin’ny fifidianana koa izy ireo ka mangataka ny hametrahana ny biometrika mba hialan’ny diso ao anaty ny lisitra.
FEDERASIONIN’NY TSIPY KANETY BE
Efa miady an-trano tanteraka ny federasion’ny tsipy kanetibe. Ity taranja ity anefa no mba nampamiratra an’i Madagasikara hatramin’izao. Mitory tsy misy porofo sady tsy manana vavolombelona ny federasiona iraisam-pirenena ny tsipy kanetibe hoy ilay filoha nesorina. Vonona hifanatrika amin’ny federasiona iraisam-pirenena izy hifanazava momba ny olany.
Tsy azo ekena ny fanaovana fihantsiana na fikasihan-tanana amin’ny kandidà mpifaninana hoy ny prefen’Antananarivo izay handray an-tanana ny fanaraha-maso ny propagandy. Efa manomboka sahady izao ny fifanenjehana eo amin’ireo samy kandida . Hisy ny fiaraha-miasa amin’ny kaomisarian’ny polisy manerana ny distrika ny prefektiora amin’ny fanaraha-maso ny ataon’ny kandidà.
JIOLAHY MATIN’NY SABATRA NENTINY
Jiolahy iray no matin’ny sabatra izay nentiny ihany tetsy Ampefiloha. Nandritry ny fanarahan-dia izay nataon’ny polisin’ny UIR no nitsoaka tampoka izy ary niditra elakelan-trano. Teo indrindra no nianjera teny am-pihazakazahana ary notsatohan’ny sabatra nentiny ihany. Tafaporitsaka kosa ny namany iray izay mpiara-manendaka aminy.
Fitaovana entina hamatsiana rano fisotro any Ambovombe, avy amin’ny FAO no nisy nanodina ary namidy tetsy Antohomadinika. « Motopompe » efa ho 150 isa no sarona teny an-toerana ary efa mipetraka tsara atsisin-dàlana, tsy tahotra tsy henatra akory. Nosamborina avy hatrany ny mpivarotra ary tsy maintsy ho tonga any amin’ny fanokafana fanadihadiana ny mpiasa ity raharaha ity. Mazava izany izao hoe maninona no tsy misy fiantraikany eny ifotony mihitsy ny fanampiana iraisam-pirenena.